မလေးရှားအစိုးနှင့် မြန်မာအစိုးရကြား မြေဇာပင်ဖြစ်ရရှာဦးမည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများဘ၀ – အပိုင်း (၂) by မောင်လူဝေး | အတ္တကင်းစင် ဒီမိုကရေစီ လွင်ပြင်
မလေးရှားအစိုးနှင့် မြန်မာအစိုးရကြား မြေဇာပင်ဖြစ်ရရှာဦးမည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများဘ၀ – အပိုင်း (၂) by မောင်လူဝေး
မလေးရှားအစိုးနှင့် မြန်မာအစိုးရကြား မြေဇာပင်ဖြစ်ရရှာဦးမည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများဘ၀
– အပိုင်း (၂) by မောင်လူဝေး
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက (မလေးရှားအစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရကြား မြေဇာပင်ဖြစ်ရရှာဦးမည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများဘ၀) ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ မလေးရှားရောက် အိမ်ဖော် (သို့) အိမ်ကျွန် အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးလေးများဘ၀အကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပြီးနောက် မပြည့်စုံသေး၊ ကျန်နေ သေးသည့် ပကတိမလေးရှားအိမ်ဖော်လေးများဘ၀ကိုဆက်ရေးပါလို့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများက တိုက်တွန်းလာသည်ကတကြောင်း၊ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရလုပ်နေသည့်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရခြင်းအားဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများကို မလေးရှားသို့ အိမ်ဖော်အလုပ် ဖြင့်စေလွှတ်ဖို့ ခွင့်ပြုတော့မည်ကို ကြားသိမြင်တွေ့နေရသောကြောင့် အပိုင်း (၂) ဆိုပြီး ဒီစာကို ဆက်ရေးလိုက်ရပါတယ်။
မှန်သောစကားကိုဆိုရပါမူ ကျနော်တို့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများကို မည့်သည့်နိုင်ငံကိုမှ အိမ်ဖော်အလုပ်၊ တနည်း အ်ိမ်အစေခံအလုပ်ဖြင့် မလာရောက်စေချင်ပါ။ အကြောင်းမှာ မလေးရှားတွင် အိမ်ဖော်အလုပ်ဟူသည် အခြားသောအလုပ်သမားများနှင်မတူ အလုပ်သမားဟူ၍ပင် သဘောမထားပဲ၊ အလွန်အမင်း နှိမ်ချစွာဆက်ဆံခံရခြင်းများ၊ တခြားအလုပ်များကဲ့သို့ အလုပ်ချိန်ဟူ၍ သတ်သတ်မှတ်မှတ် သတ်မှတ် ထားခြင်းလည်းမရှိ၊ အချိန်နဲ့အမျှ အိမ်မှုကိစ္စများအားလုံးနှင့် မဆိုင်တာရော၊ ဆိုင်တာရော အကုန်လုံး သူ့အလုပ်ချည်းဖြစ်နေလေတော့သည်။
များသောအားဖြင့် အိမ်ရှင်များ မအိပ်မချင်း၊ ထိုအ်ိမ်ဖော် အိမ်အစေခံအလုပ်သမမှာ အိပ်လို့မရတော့ပေ။ အိမ်ရှင်များမှ ညဖက်ပိုင်းတွင် သောက်စားမူးရူးပြီးဆုံးသည်အထိ အလုပ်လုပ်ပေးရလေတော့သည်။ မနက်လည်း အစောကြီးထရပြီး အိမ်အလုပ်များကိုလုပ်ရ၏။ ထိုအခါ အိမ်ဖော်ခေါ် အိမ်အစေခံသည် အလုပ်သမားနှင့်မတူတော့။ “အိမ်ကျွန်” နှင့် ပို၍တူလာသည်။
အ်ိမ်ဖော်အလုပ်လာလုပ်သော အင်ဒိုအမျိုးသမီးလေးများသည် အများအားဖြင့် တောနေလူတန်းစားများဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်သမား အခွင့် အရေးနားမလည်မှု၊ ပညာမတတ်မှု၊ ဗဟုသုတအားနည်းမှုတို့ကြောင့် အိမ်အလုပ်များလုပ်စဉ်တွင် အမှားအယွင်းဖြစ်ပေါ်လာပါက အိမ်ရှင်များမှ ခွင့်မလွှတ်တော့။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် နှိပ်စက်လေတော့သည်။ ရေနွေးပူနှင့်လောင်းခြင်း၊ ဓါးဖြင့်မွန်းခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုများလုပ်ခြင်း၊ အစရှိသည့် လူမဆန်သည့်လုပ်ရပ်များကို လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ဖြင့် လုပ်လေတော့သည်။
ထိုသို့ အိမ်ရှင်မှ အိမ်ဖော်အားနှိပ်စက်သည့်အခါ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအိမ်များမှ အကူအညီပေးခြင်းများ လုံးဝမရှိ။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်နီးနားမှသော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာကဲ့သို့ ၀င်ရောက်ပြောဆို မေးမြန်းခြင်း၊ စုံစမ်းခြင်း ကူညီမှုများလုံးဝမတွေ့ရ။ အလွန့်အလွန် ဆိုးဝါးသောအိမ်ရှင်များကမူ အိမ်ဖော်အား သူတို့စိတ်ကြိုက် အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ပြီးသည့်အခါ ရဲစခန်းတွင် ထပ်မံပြီးအမှုဖွင့်၏။ ထိုအမှုဖွင့်ခြင်း ကား ပိုက်ဆံခိုးခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးခြင်းဟူသော စွပ်စွဲချက်ပင်ဖြစ်တော့သည်။ လွန်စွာမှယုတ်ကန်းသော၊ အောက်တန်းကျသော စိတ်ဓာတ်ဖြစ်၏။ အိမ်ဖော်တွင် နားရက်မရှိ၊ အချိန်နာရီမရှိ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် လူမဆန်စွာ ခြေလွန်လက်လွန် နှိပ်စက်မှုများကြောင့် အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းရောက်သည့်အခါမှ ထိုပြဿနာမှာ ဘွားကနဲပေါ်လာပြီး သတင်းစာများ၊ ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတွင် လူအများ ကြားရ သိရလေတော့သည်။ ဤသည်မှာလည်း သတင်းမီဒီယာများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ထိုသို့ပြဿနာများမပေါ်ဘဲ ကြိတ်ပြီးအနှိပ်စက်ခံ၊ အညှင်းဆဲခံပြီးအလုပ်လုပ်ပေးနေရသည့် အိမ်ဖော်များ မည်မျှရှိနေပါပြီလဲ…? အလွန် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလှပေတော့သည်။
ထိုထိုသောပြဿနာများ ခဏ ခဏ ပေါ်ပေါက်သိရှိလာရသော အင်ဒိုနီးရှားအလုပ်သမားရေးရာ တာဝန်ရှိသူတို့မှ ဒေါသတကြီးဖြင့် မလေး ရှား အစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့အား အရေးတကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားအလုပ်သမားတာဝန်ရှိသူတို့မှ အလုပ်သမားအခွင့် အရေးကို တိတိကျကျ တောင်းဆိုတင်ပြကြတော့သည်။
အရင်ကလို နိုင်ငံကူးပတ်စ်ပို့ (passport) အား အိမ်ရှင်မှသိမ်းထားခြင်း၊ အေးဂျင့် လူပွဲစားမှ သိမ်းထားခြင်းများကို လုံးဝခွင့်မပြုတော့ပေ၊၊ တပတ် တရက်နားရက်ပေးရန်၊ လစာကိုလည်း တလကို စားစာရိတ်ငြိမ်း ၉၀၀ နှင့် ၁၀၀၀ ပေးရန်နှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် လူမဆန်စွာညှင်း ပန်းနှိပ်စက်မှုများကို လုံးဝ လုံးဝ မပြုလုပ်ရန်နှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အေ၇းများကို အပြည့်အ၀ပေးရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးနောက် အ ကယ်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးချက်များ မလိုက်နာ မလိုက်လျှောပါက အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးများအား အိမ်ဖော်အဖြစ် မလေးရှားနိုင်ငံသို့စေလွှတ် ခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုတော့ဟု အင်ဒိုနီးရှားအလုပ်သမားတာဝန်ရှိသူတို့မှ ပြတ်သားစွာရာဇသံပေးလိုက်လေတော့သည်။ ဤသို့ အင်ဒိုနီးရှားအလုပ်သမားတာဝန်ရှိသူတို့မှ ပြတ်သားစွာရာဇသံပေးလိုက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်မှာ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ဦးဆောင်သော မလေးအစိုး ရကို်ယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ မြန်မာဦးသိန်းစိန်အစိုးရသို့ မြန်မာအမျိုးသမီးအိမ်ဖော်စေလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို ဆွေးနွေးခြင်း၏အစ မြန်မာအမျိုး သမီးလေးများ၏ အိမ်ဖော်ဘ၀နိဒါန်းပင်ဖြစ်တော့သည်။
• အိမ်ဖော်မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများကို ဘယ်သူကတာဝန်ယူမှာလဲ…
မြန်မာအစိုးရသံရုံးက တာဝန်ယူမှာလား … ?
လက်ရှိမြန်မာဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်သော အရပ်သားအစိုးရဟု တွင်တွင်အော်နေလေ၏။ ပါးစပ်က တွင် တွင်အော်နေရုံနဲ့ မပြီးချေ။ ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရဖြစ်ပါက ပြည်သူကတင်ပြသော အကြောင်းအရာကိစ္စကြီးငယ် တို့အား လေးစားစွာဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။
ယခု မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများအား မလေးရှားသို့ အိမ်ဖော်၊ အိမ်စေအဖြစ် စေလွှတ်ဖွယ်ရာအကြောင်းကလည်း များစွာရှိ၏။ မြန်မာပြည် တွင် လူပွဲစားအေးဂျင့်ဖွင့်ထားသော အေးဂျင့်အများစုသည် အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်နေသူများ၊ စစ်အုပ်စုနဲ့ ပတ်သက်နေ သော သူများကအများစုဖြစ်နေသောကြောင့် ၎င်းတို့အပေါင်းပါများ အလုပ်အကိုင်ရစေရန်နှင့် ၀င်ငွေရစေရန် ကြံကြ ဖန်ကြ ပေအုန်းတော့ မည်။
ထိုသို့ မဖြစ်မနေ မြန်မာအမျိုးသမီးကလေးများ မလေးရှားသို့ အိမ်ဖော်အဖြစ်စေလွှတ်မည်ဆိုပါက၊ မည်သူက တာဝန်အပြည့်အ၀ယူမည်နည်းဟု မလေးရှားရှိမြန်မာလူမျိုးတဦးအနေဖြင့် ကျနော်မှမေးလိုသည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တာဝန်ယူမည်လား …?
အေးဂျင့်လူပွဲစားများက တာဝန်ယူမည်လား ..?
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးတာဝန်ရှိသူတို့မှ တာဝန်ယူမည်လား …?
တာဝန်ယူပါမည်ဆိုစေကာမူ မည်သို့မည်ပုံတာဝန်ယူမည်ဆိုသည်ကို ပွင်းလင်းထင်သာမြင်သာရှိရန် လိုအပ်လှပေသည်။
လက်ရှိ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးမှတာဝန်ရှိသူဆိုသူတို့မှာ ဘယ်နိုင်ငံကမှ မကောက်သော၊ မယူသော အခွန်ကောက်ခြင်းသည် “တို့ တာဝန်အရေးသုံးပါး” ထဲတွင် ပါနေသလားမသိ။ တာဝန်ကြီးတရပ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ passport သက် တမ်းတိုးခြင်း ၊ passport အသစ်လဲလှယ်ခြင်းများအား မည်သည့်နိုင်ငံမှ မကောက်သော၊ မရှိသော၊ စံနှုန်းများဖြင့် TAX အခွန်များကို တက် ကြွစွာဖြင့် ကောက်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုမှာ မလေးရှားရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်သော်လည်း ကောင်း၊ မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် အေးဂျင့်ဆိုသူ လူပွဲစားများကြားတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသောပြဿနာများစွာရှိ၏။ မြန်မာအလုပ် သမားအများစု တရားမ၀င်အလုပ်သမားဖြစ်ရခြင်း တနည်း (OVERSTAY) ဖြစ်ရခြင်း အများစုမှာ အေးဂျင့်လူပွဲစားများကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
အေးဂျင့်အများစုသည် မလေးရှားသို့ရောက်ရှိလာသော အလုပ်သမားအသစ်များကို အလုပ်ဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီး အလုပ်သွင်းပေးကြ၏။ ထိုသို့ အလုပ်မြန်မြန်သွင်းပေးခြင်းမှာ ၎င်းတို့မှကျွေးထားရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းတို့သွင်ပေးသောအလုပ်မှ အလုပ်ရှင်သည် လစာ မှန်မှန်ပေးသလား၊ မပေးလား၊ မစုံစမ်း မမေးမြန်းချေ။ လစာသည် မြန်မာပြည်တွင် စာချုပ်စဉ်ကဖော်ပြထားသော အခြေခံလစာ ဖြစ်မဖြစ် ဟုတ်မဟုတ် လုံးဝမစဉ်းစားပေ။
မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားအသစ်အများစုမှာ အင်္ဂလိပ်လိုလည်း ရေလည်ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိမှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရောက်ကာစဖြစ်သောကြောင့် မလေးစကားကိုလည်း လုံးဝနားမလည်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထိုမလေးအေးဂျင့် (သို့) မလေးတရုတ် အေးဂျင့်၏ဘာသာပြန်ဆိုသူ မြန်မာလူမျိုးက ပိုလုိ့ပင်လက်စွမ်းပြပြီး အတင်းထိုးထည့်လေတော့သည်။ ထိုစဉ်တွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားလူသစ် အလုပ်သမားများထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စကား နဲနဲပါးပါးပြောနိုင် ဆိုနိုင်သူပါလာလို့ မေးမြန်းပါမူ (temporary) ခဏဟုပြောဆိုကာ တသက်လုံးသွင်း ထားလေတော့သည်။ ထိုအခါ အလုပ်သမားမှ အလုပ်ချိန်များလွန်းခြင်းများ၊ မြန်မာပြည်မှလာစဉ်က ချုပ်ဆိုခဲ့သောစာချုပ်ပါ အခြေခံလစာ မဟုတ်သောကြောင့် အလုပ်ရှင်အားပြောဆိုခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ အိုတီ (overtime) သတ်မှတ်နာရီ မရရှိခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပြောဆိုမေးမြန်းသောအခါ ပြသာနာများစွာဖြစ်လာတော့သည်။ ထိုအခါ ထိုထိုအလုပ်ရှင်များသည် အေးဂျင့်အားလွှဲချကာ ၎င်းတို့မသိ ကြောင်း၊ တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်းကို အချို့သောအလုပ်ရှင်က အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြော၏ တချို့သောအလုပ်ရှင်ကမူ ရင့်သီးရိုင်း စိုင်းစွာပြောတော့သည်။ ထိုသို့သော ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ အလုပ်သမားသည် အေးဂျင့်အားဖုန်းဆက်၏။ အေးဂျင့်တို့သည် ဖုန်းမကိုင်တော့ချေ။ ဖုန်းကိုင်ပြန်သောအခါ လာမည်ဟုပြောဆိုသော်လည်း မပေါ်လာတော့ပေ။ ဤအတောအတွင်းမှာပင် အလုပ်သမား သည် ထိုအလုပ်မှပြေးလေတော့သည်။
ဤသို့ဖြင့် ကောလင်းပြေး (running calling ) ဟူသောစကားလုံးအသစ် မလေးရှားတွင် ထူးဆန်းစွာပေါ်လာတော့သည်။ ထိုသို့ (running calling) ဟူသော ဝေါ်ဟာရအသစ်စကားလုံးသည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားအသိုင်းအ၀န်းတွင် ခေတ်သစ်ဝေါ်ဟာရစကားလုံး တလုံးအဖြစ် ယနေ့တိုင်အောင် ရေပန်းစားလျှက်တည်ရှိနေလေတော့သည်။ ထိုသို့ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်အပြီးတွင် ထိုကောလင်းပြေးအလုပ် သမားသည် အေးဂျင့်အားဖုန်းဆက်၍ မိမိ passport ပတ်စ်ပို့အား ပြန်ရွေးယူရန်ညှိနှိုင်းသောအခါ မတန်တဆ လျှော်ကြေးငွေတောင်းလေ တော့၏။ ထို့ထက်ပိုဆိုးသည်မှာကား ထိုအလုပ်သမားအား မြန်မာပြည်ပြန်ပို့မယ်ဟူသော ခြိမ်းခြောက်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ထိုကော လင်းပြေးသူ မြန်မာအလုပ်သမားသည် အကြီးအကျယ်လန့်သွားလေတော့သည်။ အကြောင်းမှာ မြန်မာပြည်တွင် လယ်ပေါင်ခဲ့သူများ၊ အိမ် ပေါင်ခဲ့သူများ၊ မတန်တဆအတိုးများဖြင့် ငွေချေးငှားလာခဲ့ရသောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေတော့သည်။ သို့ဖြင့် ကောလင်းပြေး မြန်မာအလုပ်သမား မှာ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မြန်မာပြည်သို့မပြန်ရဲသေးပေ။ ကောလင်းပြေးများကဲ့သို့ အေးဂျင့်လူပွဲစားများမှ နိုင်ထက်စီးနင်းဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံနေရ သောမြန်မာအလုပ်သမားများ မည်မျှရှိနေပါပြီလဲ…?
အမှန်မှာမူ ထိုအေးဂျင့်၏ မရိုးသားသော၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုပြီး လွန်စွာယုတ်မာသောလုပ်ရပ်ကြောင့် ထိုအလုပ်သမား သည် တရားဝင်လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအလုပ်သမားအဖြစ်မှ တရားမ၀င်အလုပ်သမားအဖြစ် (သို့) ကောလင်းပြေးဘ၀သို့ရောက်ရခြင်း၏အကျိုးဆက်ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။
ထိုသို့သောပြဿနာများသည် အေးဂျင့်များမှ၊ တဖက်သတ်မတရားမှုများကြောင့်ဖြစ်ရသော ပြဿနာများဖြစ်သည်ကို မလေးရှားရှိ မြန်မာ သံရုံးသည် မသိမဟုတ်။ ကောင်းစွာသိ၏။ မြန်မာသံရုံးတာဝန်ရှိသူတို့သည် သိလွန်းလို့ ခက်နေသလားမပြောတတ်။ ကျနော် မလေးရှား အနှစ်၂၀ ကာလအတွင်း မြန်မာသံရုံးမှ မိမိနိုင်ငံသားများအတွက် ဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်သောပြသာနာဟူ၍ တခါမှမကြားဖူးခဲ့။ ယခုလည်း မကြားခဲ့ဘူးသေးချေ။ သံရုံးသံအမတ်နှင့် ၀န်ထမ်းများသာငွေထုပ်ပိုက်ပြီးပြောင်းသွားကြသော်လည်း အသစ်အသစ်ရောက်လာသော ၀န် ထမ်းတို့၏ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုအပြုအမူတို့သည် မြန်မာပြည်တွင်းကပင် သင်တန်းတက်လာသလားမသိ။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောဆိုပုံ၊ မချေ မငံဆက်ဆံပုံတို့မှာ တပုံစံတည်းပင်ဖြစ်နေသည်မှာ ရွံ့စရာကောင်းလှတော့သည်။
လက်ရှိမလေးရှားရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ (passport) ပတ်စပို့စ်များကို ဥပဒေကြောင်းအရ တရားမ၀င် အလုပ်ရှင်မှသိမ်းထားခြင်းများ နှင့် အေးဂျင့်လူပွဲစားများမှသိမ်းထားတာကို ရအောင်ဆောင်ရွက်မပေးနိုင်တဲ့ မလေးရှားမြန်မာသံရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ မြန်မာအမျိုး သမီးကလေးများ မလေးရှားကို အိမ်ဖော် အိမ်စေအဖြစ် အလုပ်လာလုပ်ခဲ့သော် မြန်မာသံရုံးမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်၊ မပေးနိုင် ဆိုတာ ကျနော်တင်ပြခဲ့တာတွေကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(ဆက်လက်၍ ၁၉၉၁ မှ ယနေ့ချိ်န်ထိ မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများဘ၀အကြောင်းကို ဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမည်။)
e-mail ; mgluuway@gmail.com